Dalxiiska Musiibada ee sharci-darrada ah ee Holland: Meel dambe oo nabdoon ma jirto
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Badbaadada Safarka & Xaaladaha Degdega ah » Dalxiiska Musiibada ee sharci-darrada ah ee Holland: Meel dambe oo nabdoon ma jirto
Belgium War Deg Deg Ah • Jebinta Wararka Yurub • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Nederland • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Holland si rasmi ah ayaa looga waayey khariidadaha dalxiiska
Daadadka daadadka ee toddobaadkan ka da’aya gobolka Jarmalka ee Northrhine Westphalia ayaa kiciyay dood kale oo weyn oo ku saabsan isbeddelka cimilada.
Musiibada ayaa sidoo kale saameyn weyn ku yeelatay dalalka deriska la ah Biljamka iyo Holland.
Dalxiiska musiibada wuxuu dhibaato ku noqonayaa jawaabeyaasha ugu horreeya.
Dadka ku nool Gobolka North-Rhine Westphalia ee Jarmalka waligood ma iloobi doonaan naxdintii habeenimadii Khamiista markii roob mahiigaan ah ay dileen oo burburiyeen tuulooyin dhan. Biyo xireenka Jarmalka ayaa wali halis ugu jira inuu burburo.
Wabiyada ayaa jabsaday bangiyadooda waxayna la tageen dhismayaal ku yaal Belgium iyo Jarmalka, halkaasoo ugu yaraan 160+ ay ku dhinteen 1,300 oo kalena wali la la'yahay.
Guryaha iyo jidadka ku yaal Nederland ayaa daadadku galeen kumanaan kun oo ka mid ah dadka degan Roermond iyo Venlo ayaa lagu qasbay inay guryahooda ka guuraan.
Haweeney gacanta ku haysata bac buluug ah oo ka timid Bad Neuenahr-Ahrweiler ayaa u sheegtay wariyeyaasha maxalliga ah: "Wax noo hadhay ma jiraan" markii ay isku dayeysay inay hesho meel ay gabbaad kula gasho dharkeeda. Biyuhu waxay ku yimaadeen daqiiqado waxayna ka baxeen aag ballaaran oo burbur ah oo aan waddanku horay u soo marin.
Akhriste ayaa u sheegay eTurboNews: Halkan Germany, qaar badan ayaa ku dhintay daadadka, boqolaal ayaa la la'yahay, kumanaan ayaa guryahooda waayey. Waa wax xun. Tani waa dhibaatada cimilada ee ka dhex furmay mid ka mid ah meelaha adduunka ugu qanisan - taas oo muddo dheer u maleyneysay inay "ammaan tahay". Meel dambe oo "ammaan ah" ma jirto
Wadooyin badan ayaa burbursan, gaadiidka dadweynaha wuxuu yimid istaag magaalooyin badan. Dadka deegaanka qaarkood ma awoodaan inay ka baxaan tuulooyinkooda
Korontada iyo adeega taleefanka ayaa hakad galay magaalooyinka iyo tuulooyinka ay aadka u saameeyeen.
Dadka waxaa lagu badbaadiyaa helikobtarro ka soo baxa saqafka sare iyo geedo. Biyo xidheenno ayaa qarka u saaran in ay dumaan. Dabdamiska, ciidanka Jarmalka, iyo jawaabayaasha kale ee ugu horreeyayba waxay shaqeynayeen saacad kasta si dadka loo badbaadiyo.
Intaa waxaa dheer, muwaadiniintu waxay isu abaabuleen inay caawiyaan dadka kale. Qaar badan oo ka mid ah kooxahan muwaadiniinta ah si wanaagsan ayey u abaabulan yihiin waxayna hadda door muhiim ah ka ciyaarayaan dadaalada samatabbixinta.
Idaacadaha maxalliga ah iyo wargeysyada ayaa siiya lambarrada koontooyinka kuwa doonaya inay lacag ku deeqaan.
Celine iyo Philippe oo ka yimid tuulada yar ee Leichlingen una dhaxeysa Duesseldorf iyo Cologne ayaa is guursaday usbuucii hore.
Halkii toddobaad xasilloon laga joogi lahaa guriga si loogu dabaaldego bisha malabkooda, waxay hadda caawiyaan muwaadiniinta walaalahood ah ee baahan. Maanta waxay caawiyeen haweeney 90 jir ah oo ku xaniban aqalkeeda.
Madaxweynaha Jarmalka Frank-Walter Steinmeier ayaa la filayaa inuu sabtida booqdo meelaha ay dhibaatadu ka dhacday. Hogaamiyaha Jarmalka, Merkel oo ka soo laabatay Mareykanka ayaa booqan doonta aagga ay musiibadu ka dhacday Axadda.
In yar oo ka mid ah xadka, Gobolka Dutch ee Limburg, ayaa masiibo lagu dhawaaqay waxaana la maqlay seeriga seeriga markii dyke ay jabtay.
Isbitaal ku yaal magaalada Venray ee Holland, oo ay ku jiraan 200 oo bukaan ah, ayaa laga daadgureynayaa qatarta fatahaada darteed.
Booliska Holland ee Venlo iyo Roermond ayaa ganaaxyo dul dhigaya dalxiisayaasha musiibada. Marba marka ka dambeysa booqdayaasha kale ee ka imanaya magaalooyinka kale ee Nederland iyo wadamada deriska ah ayaa u sii socday gobolka masiibadu ka dhacday si ay sawirro uga qaadaan ugana dhajiyaan baraha bulshada.
Tani hadda waa sharci darro Holland. Waxay si weyn u carqaladeysaa dadaallada samatabbixinta, waxayna ku dhacdaa asturnaanta dadka maxalliga ah.